Tsy ampy ny fanagadrana any Eddy sy Mbola ary Hasimpirenena satria tsy izy ireo ihany no fantatra fa isan’ireo voarohirohy amin’ny halatra sy nanodinkodina volam-bahoaka sy harena teto - La gazette DGI du 4 avril 2019 - Survivre à Madagascar dans le milieu des infrastructures télécom et réseaux CISCO
Accueil Corruption Madagascar Tsy ampy ny fanagadrana any Eddy sy Mbola ary Hasimpirenena satria tsy...
Tsy ampy ny fanagadrana any Eddy sy Mbola ary Hasimpirenena satria tsy izy ireo ihany no fantatra fa isan’ireo voarohirohy amin’ny halatra sy nanodinkodina volam-bahoaka sy harena teto – La gazette DGI du 4 avril 2019
Niandrandra fandrosoana haingana ny Malagasy ary maika dia maika tamin’izany. Ny antoko pôlitika najoro koa nanaovana tokam-barotra hoe Tgv (Train à grande vitesse) no dikanyiraisam-pirenena izay nohagasiana hoe : “Tanora malagasy vonona”.
Raha ny resaka tamin’ny fampielezan-kevitra tamin’ny fifidianana ho filoham-pirenena izay dia toa ny lamasinina haingam-pandeha voalaza etsy ambony io, izay tsy mbola misy akory eto Madagasikara fa any amin’ny firenena mandroso no ahitana azy ka mahatratra hatrany amin’ny 200km/h ny hafangainam-pandehany. Dia izany no natao filamatra ka nambaboana ny saina sy ny fon’ny Malagasy fa indrindra ny tanora.
Dia roboka tokoa ny Malagasy tsy afa-nandinika loatra ka nihazakazaka namonjy ilay fiara be mandefa sinema eny ankalamanjana manerana ny renivohi-paritra rehetra. Ny fizarana ankanjo sy ny lambahoany ary ny elo dia nodakana fotsiny fa na ny olona tsy hifidy aza dia nasaina nanao ireo fanamiana ireo. Tsy tenenina intsony ny mpanakanto izay nokaramaina volabe isan-karazany ka rehefa tonga ny fotoana nanaovana ny fampielezan-kevitra dia vahoaka sesehena izay tsy izy no tonga nihazakazaka namaly ny antso. Tsy ny teo an-tanàna nihaonana ihany fa hatrany amin’ny toerana lavitra ny fampisehoana, izay mihoatra ny distrika nihaviana no tonga nanatrika ny fety.
Noharatsiana avokoa ny mpifaninana rehetra fa tsy misy mahavita azy fa ny TGV sy ny Mapar no tena dadany. Ny kobaka am-bava koa tsy hay velively ny milaza azy fa tena nampisy fanantenana ho an’izay tsy mahalala. Hatramin’ny ankizy madinika vao miana-miteny aza dia mihira ilay hira filamatra ny TGV sy Andry Rajoelina iny avokoa.
Raha toa aza ka somary manambara hevitra nanohitra izany tamin’ireny fotoana ireny fa tsy izy io fa be lazao fotsiny dia ady ka nisy hatramin’ny fampitandremana mihitsy no azo.
Nankalazana fa nahavita azy satria kandidà tanora sy manam-pahaizana ary manam-bola ingahy Andry Nirina Rajoelina.Tena marina tokoa izany satria mpandraharaha tamin’ny resaka dokambarotra na “publicité” ny tenany. Iza tokoa moa no tsy nahalalala ny orinasa “Injet”, izay voalazany fa vokatra ny fandraisany an-tanana ny orina “Doma pub” izay niandraikitra ireo takela-by lehibe teto Antananarivo teo aloha.
Fa na izany aza dia isan’ny nampisongadina azy koa ny fotoanan’ny Tetezamita iny. Firy moa no mpanan-karena vaovao tamin’iny fotoana iny? Ireo mpanan-karena tampoka tamin’iny fotoana iny no mifehy ity firenena ity ankehitriny. Tsy mbola nisy teto amin’ity firenena ity filoham-pirenena afaka nahavita foto-drafitrasa lehibe toa ny hôpitaly manara-penitra maro, ny kianjan’ny Maki, ny kianja ny mpanakanto eny Analamahitsy, nefa tsy nahazo fanampiana tany amin’ny vondrona iraisam-pirenena raha tsy ingahy Andry Nirina Rajoelina. Tena marina izany ary niaraha-nahita teto.
Izany no sary nipetraka tao amin’ny mpomba an’ingahy Andry Nirina Rajoelina ka nahatonga ny olona tany amin’ny faritra nihazakazaka nanohana azy. Marihina fa tsy lany teto Antananarivo na Analamanga izy. Antananarivo izay efa manana fomba fijery hafa noho ny any amin’ny faritany rehetra.
Noharatsiana avokoa ny filoham-pirenena rehetra nitondra teto Madagasikara hatramin’izay satria hono tsy nahavita zavatra noho izy ireo. Na tamin’ny fankalazana ny faha 72 ny tolon’ny MDRM tamin’ny 29 martsa 2019 lasa teo aza dia mbola nilaza ingahy Andry Rajoelina fa manomboka izao dia handroso i Madagasikara fa tsy toa ny 59 taona lasa izay.
Ankehitriny nefa dia maro no diso fanantenana amin’ny kabary natao sy ny fanindrahindrana ny IEM (Initiative pour l’émergence de Madagascar). Tsy hita izay taratra ny fiovana eto amin’ny firenena. Ny mahantra toa voa mainka mitombo, ny fiainana tsy hita izay fiovany, ny asan-dahalo sy ny tsy fandriam-pahalemana tsy misy fitsaharany ary mivadika hatrany amin’ny fanaovana takalonaina ny any ambanivohitra indray aza izany na “kidnapping”. Tsy mbola ahitana taratra na fandrosoana aloha hatramin’izao eto Madagasikara. Raha toa ka ny fanagadrana an’i Eddy, Mbola Rajaonah, Hasimpirenena no isan’ny zava-dehibe teto amin’ny firenena dia tsy ampy izany satria tsy izy ireo ihany no fantatra fa isan’ireo voarohirohy amin’ny halatra sy nanodinkodina volam-bahoaka sy harena teto. Tokony hotohizana izay rehetra tafiditra amin’ireny raharaha ireny na ny mitovy amin’izany satria fantatra fa ny tena atidohan’izy ireo sy ny lehibe dia mbola miriaria sy isan’ny mbola mitondra fanjakana amin’izao fotoana izao aza.
Iza moa no tsy nahalala fa efa nahazo vahana ny kolikoly avo lenta teto amin’ity firenena ity? Bois des roses, volam-panjakana, fananam-panjakana, vatosoa sy volamena, hosoka maro isan-karazany no nataon’ireo mpitondra nifandimby sy ny mpomba azy ireny na manao pôlitika na koa mpanao bizina fotsiny izao.
Mbola tsy hita ny mampiavaka ny fanjakana tarihin’i Andry Rajoelina sy ny fanjakan’i Hery Rajoanarimampianina aloha hatramin’izao. Dia mbola Rakotozafy ihany aloha no Alexis raha ny zava-misy eto Madagasikara no asian-teny.
Mbola miankina amin’ny mpamatsy vola ivelany toa ny FMI ihany Rajoelina toa ireo mpitondra nodimbiasiny teo aloha ihany. Inona ilay fiovana e!
Article précédentTsy zakan’ny mpitantana ny Jirama ny ady atao amin’ny gaboraraka sy halatra isan-karazany, efa nahatratra mpangalatra 41 ny Pro-GSI- 24H Mada FB du 4 avril 2019
Article suivantTsikombakomba sy kolikoly avo lenta : Mbola mirioriosy mangatsiatsiaka any ny maro – La gazette DGI du 4 avril 2019